Manampy trotraka ny tahotra ny tsaho niely… : dimy, hatreto, ny matin’ny pesta eto Antananarivo | NewsMada
Manampy trotraka ny tahotra ny tsaho niely… : dimy, hatreto, ny matin’ny pesta eto Antananarivo
Nisahotaka ny teto an-dRenivohitra. Nisy nandefa vaovao tamin’ny “Facebook” ny faran’ny herinandro teo fa tafakatra 20ny matin’ny pesta indrindra ny kilonga raisina an-tanana eny amin’ny hopitaly Ambohimiandra. Raha ny vaovao voamarina, 5 hatreto no namoy ny ainy teto Antananarivo.
Ho an’ny marary mbola manaraka fitsaboana eny amin’ny hopitaly, voahaja tsara ny fitokanan’izy ireo toerana, araka ny fanazavan’ny tomponandraikitry ny minisiteran’ny Fahasalamana. Iray ny marary eny amin’ny Cenhosoa voan’ny pesta aretin-tratra, roa ao amin’ny hopitaly Befeletanana samy voan’ny pesta areti-tratra avokoa, iray ao amin’ny HJRA, enina kosa eny amin’ny hopitaly Ambohimiandra ka ny efatra ahina ho pesta aretin-tratra avokoa ny iray, pesta atodintarina raha mbola tsy voasokajy ho pesta ny iray farany. Omaly tamin’ny 11 ora antoandro, dimy ny olona matin’ny pesta teto Antananarivo, 28 ny tranga nampiahiahy ka mbola tokana ihany no voamarina fa tena pesta tokoa. 23 ny marary velona. Amin’ny tranga 28, mahatratra 21 ny pesta amin’ny tratra raha enina ny miseho amin’ny atodintarina. Voakasika avokoa ny boriborintany enina eto an-dRenivohitra : Antohomadinika, Soavimasoandro, Andraisoro, Manjakaray , Ambodihady Ambohimanarina, Ankaraobato, 67 ha Avaratra sy Atsimo, Anjanahary, Ambolonkandrina…
Nilaza ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fahasalamana fa misokatra sy afaka mandray ny fitsaboana ny pesta avokoa ny CSB sy ny hopitalim-panjakana rehetra manerana ny Nosy. Efa nambara ho ren’izao tontolo izao niaraka tamin’ny Sampandraharahan’ny Firenena mikambana momba ny fahasalamana (OMS) fa misy ny aretina pesta eto Madagasikara.
Nijery ny marary teny amin’ny hopitaly Ambohimiandra ny tomponandraikitra niaraka tamin’ny mpanao gazety hisorohana ny honohono mahazo vahana.